सलमान खानले किन दिदैन किस सिन ? यस्तो छ रहस्य - Kendrabindu Nepal Online News
सलमान खानले किन दिदैन किस सिन ? यस्तो छ रहस्य
फिल्ममा ‘किसिङ सिन’ सामन्य कुरा भइसक्यो । अहिले त सबै फिल्ममा राखिएको हुन्छ । सेन्सर बोर्डले पनि किसिङ सिनलाई छुट दिएको छ । सलमान खान बाहेक सबैले फिल्ममा किसिङ सिन सहजै गर्छन् । शाहरुख खान र अजय देवगन जस्ता विवाहित स्टारहरुले कसम तोडिसकेका छन् भने सलमान खान किसिङ सिन दिन हिच्किचाउँछन् ?
सलमान खानले अहिलेसम्म यस्तो प्रकारको सिन दिएका छैनन् । यो प्रश्न सबैले उनलाई सोध्ने गर्छन् । त्यसको जवाफमा सलमानले उनलाई त्यस्तो दृश्य गर्न अनौठौ लाग्ने बताउँदै आएका छन् । साथै परिवारमा सँगै बसेर यस्तो प्रकारको दृश्य हेर्न नसक्ने भएकोले पनि उनी टाढा रहेको बताउँछन् ।
त्यसको लागि उनी आफ्नो परिवारको उदाहरण दिन्छन् । प्राय उनको पुरै परिवार बसेर अंग्रेजी फिल्म हेर्ने गर्थे । अंग्रेजी फिल्ममा जब हिरो हिरोइनको किस गर्छन् उनको परिवार यताउती हेर्न थाल्थे वा ठूलो ठूलो आवाजमा बोल्न थाल्थे । परिवारको यस उल्झनबाट बचाउनको लागि उनले अहिलेसम्म यस्तो सिन नगर्ने फैसला गरेको बताउँछन् ।
यो त भयो सलमान खानको आफ्नो कुरा । तर हालै उनको भाइ अरबाजले कपिल शर्माकोे शोमा किसिङ सिनको बारेमा खुलासा गरे । कपिल शर्माको च्याट शोमा सलमानलाई सोधिएको थियो “कुनै पनि हिरोइनको पहिलो फिल्म, र उनीसँग त्यो भन्दा पहिला कहिले भेट भएको थिएन यस्तो अबस्थामा कसरी हिरोइनसँग रोमान्टिक दृश्य गर्नुहुन्छ ?”
सलमानले त्यसको जवाफमा कसैसंग स्क्रिनमा किस नगर्ने भएकोले उनलाई खासै फरक नपर्ने बताए । सलमानको कुरा सकिए लगत्तै कुरै कुरामा अरबाजले थपे, ‘उनले अफ स्क्रिनमा यति धेरै गर्छन् अन स्क्रिनमा गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन् ।’ अरबाजको यस्तो जवाफले त अर्कै मतलव निस्कन्छ । के अरबाजको कुरा साँच्चै नै मजाक थियो वा मजाक मजाकमा साँचो कुरा बाहिर आएको हो ? यसको जवाफ ति दाजुभाईलाई नै थाहा होला ।
सलमान खानको जस्तै ‘बडी’ भएका १० नेपाली हिरो (भिडियो रिपोर्ट)
यस्तो बन्यो सलमान र कट्रिनाको ‘भारत’ को ट्रेलर